Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop Qaybta 5 | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan bilownay inaan dhameyno xiisahaas tutorial, meesha aan ku baranno la shaqeynta Adobe Bridge y Adobe Photoshop wada jir si loo fududeeyo himilada tifaftirka koox sawirro ah loona siiyo dhammaystirka lama huraanka ah si ay ugu suurtagasho inay u gaarsiiso macmiil. Adobe Photoshop wuxuu ka kooban yahay qalab taxane ah, sida Waxqabadyo horay loo sii qorsheyn karo iyo shaqo Dufcaddiiba oo noo oggolaaneysa inaan howshan aad u fududeyno.
Marar badan in dib loo xareeyo 20, ama 50, ama 150 sawir hal dariiq waa mid aad u dhib badan oo dhib noqon kara, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan ku tuso sida ugu fudud uguna raaxada badan ee aad ku wada shaqeyn karto dhowr koox oo sawiro ah. Waa tan Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (qaybta 5-aad).
Waxqabadyada Barnaamijku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqada dufcadda, maadaama la'aanteed tallaabadaas horay loo sii qorsheeyay Photoshop Ma garanayo amarradayda la fulinayo ama sida ay u kala horreeyaan, sidaa darteed Waxqabadyadu waa qayb muhiim u ah shirkadda gacanta ku haysa. Si aad u fuliso qaybtaan barashada ah, waa inaad raacdaa tilmaamaha laga helo Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (qaybta 4-aad).
1 Waxqabadka horey loo qorsheeyay
2 Diyaarinta sawirada tafatirka dufcadda
3 Jadwalka shaqada Dufcaddii
Waxqabadka horey loo qorsheeyay
Mar alla markii aan horay u soo qorsheynnay Waxqabadka oo aan ugu dhex jirnay kooxdeeda cusub, oo aan ku magacaabay Abuurista khadka tooska ah, Waxaan wax ka badali karnaa Ficilkan haddii loo baahdo wakhti kasta, kana saarno amarrada aan na danaynayn ama soo bandhigida amarro cusub. Waxaan sidoo kale ku fulin karnaa waxqabadka qeyb ahaan, taasi waa, haddii aanan rabin inaan codsano labada daweyn ee hore, waxaan gujineynaa midka seddexaad waana laga dilayaa taas.
Diyaarinta sawirada tafatirka dufcadda
Marka aan helno waxqabadka sida aan rabno, waxaan usii amba baxeynaa diyaarinta kooxda sawirada ah ee aan wax ka badalayno. Ugu horreyntii, waa inaan abuurnaa laba fayl, mid aan magacaabi doonno Asal iyo Meel kale. Faylladani waxay naga caawin doonaan inaan sheegno Photoshop laga bilaabo halka ay tahay inaad ka qaaddo sawirada aan dib u hagaajin doono iyo halka ay tahay inaad ka tagto. Labadan fayl ayaa muhiim u ah sida waxqabadka laftiisa si ay u awoodaan inay dufcado u shaqeeyaan sawirada.
Jadwalka shaqada Dufcaddii
Iyada oo fayllada horay loo abuuray, waxaan aadeynaa wadada Faylka-otomaatiga-Dufcaddii, oo mar uun halkaa, sanduuqa wadahadalka qalabka ayaa ku furi doona fursado dhowr ah:
ciyaaro: Wuxuu muujinayaa kooxda Waxqabadka iyo Waxqabadka aad rabto inaad barnaamij ka sameyso automation. Waxaan doortaa kooxda ficilada loo magacaabay Hal Abuur Khadka iyo ficilka 1aad, oo ah midka aan ugu talagalnay fulinta.
AsalkaIkhtiyaarigan waxaan ka dooran doonnaa dariiqa ama galka uu ka imaan doono Photoshop waxay qaadan doontaa sawirrada si ay wax uga beddelaan Luud. Waxaan ku dari karnaa sawirada barnaamijka galka, soo dejin karnaa, sawirada furan ama ka socda Bridge toos ah. Maanta waxaan baran doonaa sida looga shaqeeyo galka, marka casharka xiga waxaan ku bari doonaa inaad si toos ah uga shaqeyso isku xirka labada barnaamij. Marka xulashada galka la doorto, dhagsii tabka Dooro oo dooro jidka galka asalka ah. Fursadaha intiisa kale, waxaan ku tilmaami doonnaa kuwa sanduuqa wada hadalka Skip ee xulashooyinka furitaanka feylasha, iyo Ka bood ogeysiisyada ku saabsan astaamaha midabka, taas oo naga caawin doonta si howshu aysan u kala go'in sawir kasta.
Ujeeddo: Waxay naga caawineysaa inaan doorto halka aan dhigeyno sawirrada retouched Photoshop. Waxay na siisaa ikhtiyaarka ah Keydso oo Xidho, taas oo uga tagaysa isla galka isla meesha, ama ikhtiyaarka Fayl, taas oo geynaysa galka kale. Waxaan dooraneynaa galka cagajuglaynta, iyo sidii qaybtii hore, waxaan uga tagi doonnaa ikhtiyaarka jira mid aan la hubin, oo ah Iska dhaafi Badbaadada sida amarrada ah ficilka, tan iyo markii aan ku talagalnay ficilka taliska Badbaadi, taas oo naga caawin doonta inaan hawsha barnaamijka u fududeyno. Magaca feylasha, waxaan ku dooran doonnaa magaca aan siin doonno sawir kasta oo Luudh ah, iyo walxaha aan dooneyno in magacaas loo sameeyo iyo sida ay u kala horreeyaan, awood u lahaanshaha xulashada xulashooyinka shukaansiga ee kala duwan, lambarro taxane ah oo dhowr-god ah, ama ballaadhin noocyo kala duwan ah iyo siday u kala horreeyaan. Xulo xulashooyinka ku habboon shaqadaada. Markaa waxaad haysataa xulashooyin dheeri ah oo aan kugula talin doono inaad iskaa u baarto.
Marka xulashooyinka kaladuwan ee sanduuqan wada-hadalka ah ee aaladda otomatiga-Dufcadde loo qaabeeyey, dhagsii Ok iyo Photoshop Waxay si otomaatig ah u tafatiri doontaa sawirrada waxayna ku ridi doontaa galka la doortay.
Qeybtii ugu dambeysay ee tutorial, waxaan ku arki doonnaa xulashooyin dheeri ah noocyada firfircoonida shaqada, iyo qoraallo xiiso leh, iyo sidoo kale faylasha waxbarida ee aad ku tababbarto guriga.
Macluumaad dheeraad ah- Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (qaybta 4-aad)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (qaybta 5-aad)
Onlaynka OCR wuxuu u rogaa qoraalka la sawiray qoraal wax laga beddeli karo